+5 ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva | Wararka Safarka
ka magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva waxay ku siinayaan guryo cad oo khaas ah, taallooyin, xeebo aad u qurux badan iyo yaabab dabiici ah sida Beerta Qaranka ee Doñana (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan meeshan). Laakiin sidoo kale dalab hoy oo aad ka heli doonto naftaada guriga.
Sidoo kale, waxaa jira qayb kale oo ka mid ah gobolka oo aan aad loogu aqoon dalxiiska oo ay ku jiraan magaalooyin yaryar oo ku yaal dhulka hoostiisa safafka buurta ee Cumbres Mayores ama Aracena. Waxaan sidoo kale ka hadli doonnaa iyaga, laakiin, wax kasta oo ka sarreeya, waxaan ku tusi doonnaa socdaalka magaalooyinka ugu quruxda badan ee Huelva oo kuu oggolaan doona inaad si qoto dheer u ogaato yaababka aaggan Spain.
1 Laga soo bilaabo Ayamonte ilaa Cortegana
1.4 Niebla, oo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva
1.6 Cortegana, si aan u dhammayno socdaalkeenna Huelva
Laga soo bilaabo Ayamonte ilaa Cortegana
Waxaan bilaabi doonaa booqashadeena tuulooyinka ugu quruxda badan ee Huelva ee ku yaal aagagga xeebaha sida Ayamonte ka dibna waxaan u dhaqaaqi doonnaa dhanka gudaha ee gobolka. Sidan, waxaan ku tusi doonaa dhammaan fursadaha kala duwan ee dhulkan quruxda badani ku siinayo.
Golaha Magaalada Ayamonte
Waxay ku taallaa afka afka Wabiga Guadiana, cagtiisa Isla Cristina marshes iyo xadka Portugal, magaaladan Huelva waa qasab. Nawaaxigeeda degmada waxaad ka heli doontaa caan Xeebta Isla Canela ku xigta Punta del Moral.
Laakiin, oo ku xigta aagagga qiimaha deegaanka, Ayamonte waxay leedahay dhaxal aad u ballaaran. Ku saabsan diinta, waxaan kugula talineynaa inaad booqato kaniisadaha Nuestra Señora de las Angustias iyo San Francisco, laga soo bilaabo qarnigii XNUMX -aad iyo kan u taagan saqafkooda Mudejar.
Waa inaad sidoo kale aragtaa macbadka El Salvador, oo ay ku yaalliin meel allabari oo Churrigueresque ah iyo miisas badan oo rinjiyeynta Flemish. Dhaxalka diimeed ee Ayamonte waxaa dhammaystiray kaniisadda Las Mercedes, Mercedario iyo Hermanas de la Cruz, kaniisadaha San Antonio, del Socorro iyo Nuestra Señora del Carmen iyo taallada qaaliga ah ee Virgen de las Angustias.
Marka laga hadlayo dhismayaasha madaniga ah, waxaad leedahay dhisme aad u qurux badan oo ku yaal Aqalka Dawladda Hoose ama Guriga Marchena, kaas oo soo saara qaabka guryaha Hindiya; xabaashii Roomaanka ee Punta del Moral; qasrigii Marquis ee Ayamonte ama Casa Grande, oo ka soo bilaabmay qarnigii toddoba iyo tobnaad.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa inaad aragto Baluarte de las Angustias, kaas oo kaliya shiraac gidaar ah ayaa hadhay; munaaraddii Canela ee cidla ahayd ee Isla iyo Buundadii Caalamiga ahayd ee Guadiana, oo kala soocday Ayamonte iyo Castro Marim, Portugal.
Fagaaraha Palos de la Frontera
Hadda waxaan kuu keennaa magaaladan yar kaliya maahan inay ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva, laakiin sidoo kale sababta oo ah qiimaha weyn ee taariikheed. Sidaad si fiican u ogtihiin, dekeddeedii way ka baxday Christopher Columbus safarkii u horseeday inuu soo ogaado Ameerika.
Waxaas oo dhami waxay ka dhigeen Palos inuu ka dhex muuqdo safarkii taariikhiga ahaa ee farshaxanka Goobaha Columbian. Magaalada Huelva waxaad ku booqan kartaa Kaniisadda La Rabida, oo aan u taagnayn kaniisadda Gothic-Mudejar oo keliya, laakiin sidoo kale haysashada madxaf u go'ay helitaanka Ameerika. Sidoo kale, dekedda Palos waxaa ku yaal Muelle de las Carabelas, oo leh taransiyo dabiici ah oo kuwa Columbus ku qaatay muuqaalkiisa.
Waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn in walaalaha caanka ah ee Pinzón, ee la socday, ay ahaayeen dad u dhashay magaaladan. Sababtaas awgeed, guriga ugu weyn iyaga, qaabka Renaissance, waxaad sidoo kale leedahay matxaf. Waxay ahayd Martín waxayna sidoo kale taallo ku leedahay magaalada.
Laakiin waxa aad ku booqan karto Palos halkan kuma eka. Waa mid aad u xiiso badan Kaniisadda St. GeorgeWaxa kale oo ay ku jirtaa qaabka Gothic Mudejar oo ay ku yaalliin frescoes Renaissance iyo farshaxan qarnigii XNUMXaad oo matalaya Santa Ana. Intaa waxaa dheer, waxaad haysataa Fontanilla, il yar oo biyo siisay caravels, iyo hadhaagii qadiimiga ahaa ee qalcaddii Palos.
Ugu dambayntii, agagaarka macbudka La Rábida waxaad ku leedahay Taallada taallo daahfurka, kaas oo lagu gaaro waddo lagu qurxiyey gaashaammada dhammaan waddamada Ibero-Ameerika iyo beerta dhirta ee José Celestino Mutis. Sidoo kale, Muelle de la Calzadilla waxaa lagu xusaa bandhig kale oo ka tagay Palos: duulimaadka Plus Ultra, bad -mareen ah, oo 1926 -kii gaadhay Buenos Aires.
Almonte, mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva
Waxaan u soconnaa gudaha gobolka Huelva si aan u joogsanno magaaladan quruxda badan oo leh dhammaan soojiidashada. Marka hore, agagaarkeeda hoose waa Xeebta Matalascañas iyo qayb wanaagsan oo ka mid ah Beerta Qaranka Doñana. Laakiin wax walba oo ka sarreeya, maxaa yeelay waxay sidoo kale ku jirtaa tuulada caanka ah ee El Rocío, halkaas oo ay ku yaalliin qurxinta quruxda badan, oo kumanaan xujey ah ay xajinayaan sannad walba. Halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan tuuladan yar.
Sidoo kale, waxaad ku leedahay taallooyin kale oo xiiso leh gudaha Almonte. Waxaa ka mid ah, kaniisadda Our Lady of Assumption, oo leh kaniisaddeeda Mudejar, hudheelka Santo Cristo iyo dhismaha Aqalka Dawladda Hoose, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad. Tan dambe waxaa ku hareereysan waddooyin cidhiidhi ah oo leh guryahoodii caddaa ee soo jireenka ahaa.
Niebla, oo ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva
Darbiyada iyo qalcadda Niebla
Waxaan imid hadda mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva, laakiin sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu yar ee la yaqaan, in kasta oo ay tahay jawharad dhab ah. Niebla waxay leedahay taariikh millenary ah. Dhab ahaantii, waxay ahayd caasimadda mid ka mid ah kooras kaas oo Khilaafada Cordoba iyo, markii dambe, waxay noqotay taifa madaxbannaan.
Si aad u fara badan, agagaarka degmada ayaa ah dolmens of La Hueca iyo de Soto, taas oo dib noogu celinaysa xilligii birta. Waxa kale oo aad ku arki kartaa magaalada buundo Roomaan ah oo si buuxda loo xafiday iyo hadhaagii kaniisaddii hore ee Masiixiyiinta laga soo bilaabo xilligii Visigoth.
Laakiin soo jiidashada ugu weyn ee Niebla waa isku -darka cajiibka ah ee ay sameeyaan derbiyadeeda iyo qalcaddiisa laga soo bilaabo xilligii Almoravid. Oo waxaa ku xiga, kaniisadda Nuestra Señora de la Granada, oo ah masaajid duug ah oo ku yaal qaabka Mudejar Gothic; qalcadda Guzmanes iyo Isbitaalka Marwada Malaa'igta, guriga dhaqanka ee hadda.
Horeba badhtamaha buurta isku-dhafan, waxaan ka helnaa magaalada quruxda badan ee Aracena, oo lagu garto guryaheeda deyrka cad leh, deegaan dabiici ah oo mudnaan leh iyo taallooyin badan. Dhanka muuqaalka, waa mid buuxda Seeraha dabiiciga ah ee Sierra de Aracena iyo Picos de Aroche, halkaas, marka lagu daro, waxaad arki kartaa goobaha qadiimiga ah ee Cueva de la Mora, Cerro del Tambor iyo del Castañuelo.
Laakiin layaabka weyn ee Aracena wuxuu ku hoos yaal aaggiisa. Waxaan ka hadalnaa Cunto yaab leh, oo albaabkiisu yahay waddada Pozo de la Nieve. Waa dhisme dhulka hoostiisa ah oo ay abuureen nabaad -guurka biyaha dhagxaanta dhagaxa ah ee Cerro del Castillo. Waxay leedahay dherer ka badan laba kun oo mitir, inkasta oo aad booqan karto oo kaliya ilaa shan iyo toban boqol. Laakiin, si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli doontaa bandhig gaar ah stalactites, stalagmites, aragonites ama coraloids oo ay weheliyaan harooyinka.
Ka dib markaad ku raaxaysato yaabkan dabiiciga ah, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato taallooyinka ugu waaweyn ee Aracena. Waxaan horey u soo sheegnay kan kuugu muhiimsan marka aad gudbineyso. Waxaan tixraacnaa qalin, qalcaddii carbeed ee qarnigii XNUMXaad aad loo ilaaliyo.
Waxaa ku xiga kan Kaniisadda Marwadayada Xanuunka Weyn, Qaabka Mudejar, inkasta oo qaar ka mid ah xubnihiisa, sida xariirka iyo kooxda heesta, ay hore u lahaayeen Gothic -kii dambe. Astaamaha qaabdhismeedka isku midka ah waxay soo bandhigaan dhismayaasha Santa Catalina Mártir iyo kaniisadaha San Pedro ama San Roque. Laakiin xitaa ka sii qurux badan ayaa ah kaniisadda Santa María de la Asunción, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad sida ku cad qaanuunka qaabka Renaissance.
Dhaxalka Aracena halkan kuma eka. Marka la eego dhismaha bulshada, waxaan kugula talineynaa inaad aragto dhismaha Aqalka Dowladda Hoose, chalanada Aracenilla, beerta San Miguel iyo, ka sarreeya, oo cajiib ah Arias Montano Casino, dhisme qaab casri ah oo cajiib ah.
Cortegana, si aan u dhammayno socdaalkeenna Huelva
Aad ugu dhow Aracena waxaa jira magaalo kale oo iyaduna xaq u leh inay ka mid noqoto magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva. Kani waa Cortegana wuxuuna isku daraa dhaxal aad u qurux badan oo leh hareeraha cajiibka ah.
Marka hore, astaantiisa weyn waa qalin. Waxaa la dhisay qarnigii XNUMX -aad waxayna ka kooban tahay qalcad, barbican iyo geedo -dhaqmeed, tii Nuestra Señora de la Piedad. Hadda, qaar maalmaha dhexe aad u xiiso badan.
Dhismaha diimeed ee ugu muhiimsan Cortegana waa kaniisadda Badbaadiye rabaani ah, oo lagu dhisay qarnigii XNUMXaad qaabka Mudejar Gothic, in kasta oo kordhintii dambe ay siisay astaamaha Renaissance. Intaa waxaa dheer, gudaha, waxaad ku arki kartaa cajiib ururinta weelasha lacagta ee mexican laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, minbar minbar isla xilligaas ah iyo shabag bir ah oo cajiib ah, iyo sidoo kale sawir diimeed hodan ah.
Waxaan kaloo kugula talineynaa inaad ku aragto magaalada Huelva the kaniisadda san sebastian, sidoo kale Gothic Mudejar; hermitage of Calvario iyo dhismayaasha of Bulshada Grand Casino iyo tiyaatarka Capitol-Sierra.
Gebogebadii, waxaan ku qaadannay dalxiiskii qaar ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva. Si kastaba ha noqotee, gobol sida Huelva ah waxaa ku yaal magaalooyin kale oo qurux badan. Tani waa kiiska, tusaale ahaan, ee Jabugo, gogoshii doofaarka ee isla magaca; laga bilaabo Almonaster la Real, oo leh masaajidkii qarnigii XNUMX -aad iyo buundadii cajiibka ahayd ee Tres Fuentes, ama de Sanlúcar de Guadiana, oo leh qalcaddeeda weyn ee San Marcos. Miyaanay ahayn sababo kugu filan inaad booqato Huelva?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Guides » Magaalooyinka ugu quruxda badan Huelva
Waxa lagu arko Nepal